War niman yohow Raggii meeye? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Hadafkaygu wuxuu yahay, bal inaan isku dayo, inaan sharraxaad guud ka bixiyo astaamaha muuqda iyo kuwa qarsoon ee xanuunka bulshadeenna haya. Ruuxii buka ama jirran, marka hore waa la baaraa, si loo helo nooca cudurka. Markii cudurka la gartana, daawo (hadduu leeyahay) ayaa loo qoraa, waxaana ka dhasha ruuxii oo biskooda. Waxaan maqaalkaan dheer ku lafagurayaa, bal iney suuroobi karto in Waalli fayow ama cudur ladan la daaweyn karo ama laga biskoon karo iyo in kale? Sidoo kale, waxaan ku eegayaa, bal in waalidaan fayow ay tahay mid laga dhaxlay awooweyaasheen (sida dhiig- karka, neefta iwm); iyo inay tahay mid geyiga geeska Afrika laga qaaday(sida sanboorka, duumada iwm); iyo/ama inay tahay mid dad shisheeye nugu rideen( sida Gumeysigii reer Yurub). Nuxurka maqaalku wuxuu ka shidaal qaatay isku dhafka wax aan maqlay�arkay� ku fakaray�ku hammiyey�mala awaalay�odorosay�sahamiyey�amaba aan ku khilaaweeyay!!! Tu kalena, waxay tahay, waxaa dhici karta, inaan hadba, sida aan wax uga soo xusuusto, aan wax uga soo xigto maqaal aan 1996kii qorey oo aan BBC(da), laanta af Soomaaliga u direy, laakiinse aysan soo dayn. Cinwaanka maqaalku wuxuu ahaa: �Takarafowfow�sidee dawlad loo dhalaa?� Maadaama Soomaalida lugu tilmaamo dad isleh, oo isku isir, diin, af iyo dhaqan ah, ayaan aragti ahaan, ku sifeeyey jir bani aadan(human body) oo kale.
Waxaa la yiri , ruuxii raba inuu arko Ilaahay, ha fiirsho uunkiisa. Akhristow, adigoon meel kale aadin, bal adigu is fiiri. Jirkaaga ku khilaawee. Xubnaha jirkaagu ka kooban yahay; sidey isugu xir xiran yihiin;sidey u wada shaqaynayan; sideeyan u kala maarmin; sidey u wada xanuunsadaan!! Haddaba, si fahmidda shaxda maqaalku ay kuugu sahlanaato:Ereyada hoos ku qoran, macnaha ku hor qoran baan ula jeedaa:- Jirka Soomaaliga (Somali body) = Ummadda Soomaaliyeed.
Xubnaha jirka(body organs) = kuwa lugu abtirsado, sida Jilibyahan, Suxulyahan, iwm. Maskaxda jirka Soomaaliga (brain of Somali body) = Dowlad ama Qaranimo.
Unugyada xubnaha= Shakhsiyaadka ay xubini ka samaysan tahay amaba ku dhexjira.
Maskaxda= Dowladnimo / qaybta unuggu(qofku) wax ku garto; Rooxaan= Awoodda unug ku garto hadba xubinta keliya ee uu isu haysto inuu yahay.
Burji = haybadda ka soo baxda maskaxda xubnaheeda oo dhammi wada ifayaan ee unug(qof) kaamil ah isu aragta. Virus Q = Qabyaaladda.
Waxaan ka afeefanayaa habka iyo hannaanka aan maqaalkaan u qoray. Waxaan si ula kac ah, uga weecday hababka iyo nidaamyada wax loo qoro. Waxaa dhici karta, inaan dhawr sadar, bog barkii ama bog keliya uga hadlo dhawr arrimood oo aan shaqo isku lahayn. Hadba sida maskaxdu u godlato�inta gacantu qalinka hayso� ayaan maqaalka u soo lisay! Aragti ahaan, afkaarta maqaalka waan isku dhex yaaciyay (Buufis-style)�Si ay sawir ugu noqoto ama ay uga tarjunto isku dhex-yaacsanaanta iyo jahwareerka xaalka tolweynaha Soomaalida. Waxaan si gaar ah, akhristayaasha uga raalli gelinayaa isticmaalidda xuruuf, ereyo ama weero af shisheeye ku qoran oo aan ka fursan waayay. Sidoo kale, waxaa dhici karta in akhrinta maqaalku ay dhaliso xanuun ama daqnasho. Takhtarradu markay rabaan inay nabar ama boog kaa dhayaan xanuun baa ka dhasha. Anigu takhtar ma ihi waxaanse is iri nabarrada inagu yaalla qolfaha ama diirka ka fuji , si inta loo dhayo ay Eebbe idankiis u biskoodaan. Ugu dambaystii,waxaan waxgaradka Soomaaliyeed (Rag & Dumar) ee laga tirada badan yahay, ee aan u arko inay Others(ka) runta ah yihiin, ka codsanayaa in wixii gafaf kama� ah , ee uga muuqda aqaalkaan, iney i tusaan, iina so gudbiyaan talooyinkooda ku wajahan.
Wixii ka yimaada maqaalkaan � shar iyo khayrba � aniga keliya ayaa ka mas�uul ah ee taa hala ogaado. *************************************************************************
Aan ku bilaabee, waa maxay farqiga u dhexeeya niman iyo rag � ama naago iyo dumar? Waxay wada muujinayaan labada jinsi ee xoolaha, dhirta iyo dadku u qaybsamaan � lab iyo dhedig. Rag iyo Dumar waa magacyo wadareed(plural names) oo keli(singular) ma leh. Labada kalese way leeyihiin oo waa nin iyo naag. Ninkii astaamo sare sida geesinimo, codkarnimo, deeqsinimo, hoggaamiyenimo, iwm. la soo baxa ayaa la yiraahdaa wan nin rag ah. Halkaas waxaa kaaga muuqanaysa in Raganimadu ay tahay maqaam ama darajo uusan nin waliba gaari ama yeelan Karin. Nin nin ka tegey oo keliya ayaa darajada raganimada kasban kara. Haddaba, inkastoo aynaan dhaqan iyo hiddo u lahayn, sow lama oran kari karin �naag naag ka tagtay oo keliya ayaa darajada Dumarnimada kasban karta.� Dhaqanka iyo afka ayaa hor istaagay oo lama oran karo naag dumar ah � sida loo yiraahdo nin rag ah. Waxa keliya oo la oran kara waa �naag diric ah�. Haweenka Soomaaliyeed barkood waxay u kasban kari waayeen darajada dumarnimada waa mawduuc ballaaran oo ka baxsan hadafka iyo bartilmaameedka maqaalkaan. Waxaase dhici karta inaan si finfiniin ah,waxyaalaha qaarkood aan qalinka afkiisa ugu mudmudo�Si xanfaf leh, dhiigna uusan uga imaan.